Onye na-emepụta MAGL na onye na-eme FAAH: JW-642 & OL-135 & PF-750 ❑ AASraw
/blog/gallery/Onye na-emepụta MAGL na onye na-eme FAAH: JW-642 & OL-135 & PF-750
Ihe na 08 / 15 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ihe niile banyere Mibolerone (Lelee tụlee)
Ọrụ 2.Biological-CAS: 1416133-89-5
Ọrụ 4.Biological-CAS: 681135-77-3
5. PF-750 Nyocha
Ọrụ 6.Biological-CAS: 959151-50-9
7. JZL-184 Nyocha
Ọrụ 8.Biological-CAS: 1101854-58-3
9.Nke na-ahọrọ ndị na-emechi ihe dị iche iche nke monoacylglycerol lipase na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
10.Guide ịzụta JW-642 MAGL nkwụsịtụ nzọụkwụ site nzọụkwụ
JW 642 vidiyo
I.JW 642 isi agwa:
aha: JW 642
Molekụla Formula: C21H20F6N2O3
Ọbara arọ: 462.4
1. JW-642 Nyocha
JW-642 (1416133-89-5) bụ onye nwere ike ịhọrọ monoacylglycerol lipase (MAGL) na IC50 nke 7.6, 14 na 3.7 nM maka òké, oke na mmadụ MAGL, n'otu n'otu. Endocannabinoids dị ka 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) na arachidonoyl ethanolamide bụ ọgwụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ọtụtụ usoro synaptic gụnyere itinye aka nke ndị nabatara cannabinoid. Monoacylglycerol lipase (MAGL) bụ hydroine gas maka hydrolysis nke 2-AG ka arachidonic acid na glycerol, si otú a kwụsị ọrụ ya. JW-642 bụ onye nwere ike imechi ihe nke monoacylglycerol lipase (MAGL) nke na-egosipụta ihe IC50 nke 7.6, 14, na 3.7 nM maka igbochi MAGL na nru, rat, na ụbụrụ ụbụrụ mmadụ, respectively.1 JW-642 bụ nhọrọ maka MAGL, achọ ihe dị elu karịa iji mechie arụmọrụ fatty acid amide hydrohese (IC50s = 31, 14, na 20.6 μM maka nru, rat, na ụbụrụ ụbụrụ mmadụ, n'otu n'otu).
Ihe omuma nke JW-642
Product aha JW-642
Nọmba CAS 1416133-89-5
Solubility Soluble na DMSO> Ụlọ Ahịa Nchekwa MN 10 na -20 Celsius C
Ụdị Ahụ Ihe ngwọta na acetate methyl
Ọnọdụ Mbupu Nyocha ihe ngwọta: ụgbọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ.Ọdịdị nke ọzọ dịnụ: ụgbọ mmiri na RT, ma ọ bụ ice anụnụ anwụrụ na rịọrọ
Atụmatụ izugbe Maka inweta elu solubility, biko kpoo ọkụ na 37 ℃ na ikwanye ya na ultrasonic bat maka a while.Stock ngwọta nwere ike ịchekwa n'okpuru -20 ℃ maka ọtụtụ ọnwa.
2. Ọrụ Nzuzo-CAS: 1416133-89-5
JW-642 bụ onye na-eme ihe ike nke monoacylglycerol lipase (MAGL) nke na-egosiputa ụkpụrụ IC50 nke 7.6, 14, na 3.7 nM maka igbochi MAGL na nru, rat, na ụbụrụ ụbụrụ mmadụ. IC50: 7.6 / 14 / 3.7 nM (òké / oke / mmadụ MAGL)
Ebumnuche: JW-642 na-emechi MAGL na-ahọrọ maka MAGL, na-achọ ka ihe dị elu karịa iji mechie arụmọrụ fatty acid amide hydrohese (IC50s = 31, 14, na 20.6 M maka nru, rat, na ụbụrụ ụbụrụ mmadụ).
3. Nyocha OL-135
OL-135 bụ onye nyocha CNS, nke nwere ike ịmepụta ihe na-egosi na FAAH. OL-135 na-egosi ọgwụ na-emepụta ọgwụ na ụdị anụmanụ dị iche iche na-enweghị ụkọ mberede nke metụtara na CB1 agonism.FAAH kpọmkwem. Onye na-eme ihe n'eziokwu OL-135 na-akpaghasị nnweta ahụ, ma ọ bụghị nkwenye, egwu egwu egwu. data na-atụ aro otu ọrụ maka endocannabinoids na mpaghara nke atụ egwu paradigms.
Ihe omuma OL-135
Nọmba CAS 681135-77-3
ọdịdị Azu uzuzu
ọcha > 98% (ma ọ bụ na-ezo aka na Akwụkwọ Asambodo)
Ọnọdụ Mbupu Ebubo n'okpuru okpomọkụ dị jụụ dị ka chemical na-adịghị ize ndụ. Ngwaahịa a zuru oke maka izu ole na ole n'oge njem nkịtị na oge ejiri mee ihe na Omenala.
nchekwa Ọnọdụ Mmiri, ọchịchịrị na 0 - 4 C maka obere oge (ụbọchị ruo izu) ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ).
Solubility Soluble na DMSO, ọ bụghị na mmiri
adịghị adị Ndụ > Afọ 2 ma ọ bụrụ na echekwara ya nke ọma
Ọgwụ Drug A pụrụ ịdọrọ ọgwụ a na DMSO
Nchekwa Nchekwa Ntanetị 0 - 4 C maka mkpirikpi oge (ụbọchị ruo izu), ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa)
4. Ọrụ Nzuzo-CAS: 681135-77-3
OL-135 bụ onye nyocha CNS, nke nwere ike ịmepụta ihe na-enweghị atụ nke FAAH na-enweghị ọrụ CB1, CB2 na μ na δ opioid nke na-eme ka analgesic na ọrụ hypothermic nke anandamide.
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) bụ enzyme nke na-ahụ maka hydrolysis na inactivation nke amy acid amides gụnyere nke na-egbu egbu. PF-750 bụ ihe dị ike, oge na-adabere, onye na-emegide FAAH na-akwadoghị X50 na 0.6 μM na IC0.016 maka oge 5 na 60, respectively.1 Nkọwapụta ọrụ nke dịgasị iche iche anụ ahụ na proteine ​​samples kpughere. na PF-750 dị oke ahọpụtara maka FAAH metụtara ndị ọzọ hydrolases ndị ọzọ, na-egosi enweghị ọrụ a na-anaghị ahụ anya na saịtị 500 μM.
Ihe Nchọpụta PF-750
Product aha PF-750
Nọmba CAS 959151-50-9
Solubility Soluble na DMSO
6. Ọrụ Nzuzo-CAS: 959151-50-9
PF-750 bụ ihe dị ike, oge na-adabere, onye na-egbochi FAAH na-emechi ihe na XXUMX na 50 μM na IC0.6 mgbe ọ na-ejikọta na FAAH maka ndị 0.016 na 5 nkeji. Fatty acid amide hydrolase (FAAH) bụ enzyme nke na-ahụ maka hydrolysis na inactivation nke amy acid amides gụnyere nke na-egbu egbu. Nkọwapụta ọrụ nke dịgasị iche iche nke anụ ahụ na-egbu anụ ahụ na-egosi na PF-60 dị oke aka maka FAAH metụtara ndị ọzọ hydrolases ndị ọzọ, na-egosi enweghị ọrụ a na-anaghị ahụ anya na 750 μM. PF-500 na-egosi 750 na-agbanye ike karị karịa URB10 (Sigma # U597) mgbe 4133 min preincubation. PF-30 dị oke aka na FAAH. Ọbụna dị ka 750 μM, ọ dịghị mmekọrịta ya na ọtụtụ enzymes a nwalere, ma URB500 na ndị ọzọ mara njedebe FAAH adịghị eme nke ọma na nkedo nkedo dị ala (597 μM).
JZL-184 (1101854-58-3) bụ onye inhibitor nke nwere MAGL na IC50 nke 8 nM na 4 μM maka igbochi MAGL na FAAH na ụbụrụ ụbụrụ ụbụrụ. Njirimara IC50: 8 nM Ebumnuche: MAGL inhibitor in vitro: JZL-184 na-agbatị DSE na ntanetị mkpụrụ na mkpụrụ akụkụ DSI na ca1 pyramidal neurons na mpekere hippocampal. JZL-184 nwere ike ịmalite imegharị MAGL karịa nkịta MAGL. na vivo: Mgbe a na-enye ụmụ oke na 16 mg / kg, intraperitoneally, JZL-184 na-ebelata ọrụ MAGL site na 85%, elu 2-AG ụbụrụ nke 8, na-eme ka ọrụ analgesic na ọtụtụ ihe mgbu nke na-arụ ọrụ n'ụzọ dị nhata. Central Cannabinoid (CB1) agonists. Nchịkwa dị ukwuu nke JZL-184 na FAAH (- / -) ụmụ na-eme ka ụda nke mmeghachi nke cannabimimetic mezuo, ugboro ugboro JZL-184 ọgwụgwọ mere ka ọ ghara ịnagide mmetụta antinociceptive ya, ikwe ka obe na-emetụta ụbụrụ nke Δ-tetrahydrocannabinol, mbelata na CB1 agonist na-anabata ihe-kpaliri Xuanumine 5'-O- (3 - [(35) S] thio) triphosphate adịgide, na nkwado dịka nke rimonabant gosipụtara-kpalitere omume ịdọrọ, n'agbanyeghị genotype.
JZL -184 Ihe omuma
Aha ọzọ JZL-184
ọcha ≥98% (TLC)
ọdịdị Agba odo siri ike
Solubility Soluble na DMSO (10mg / ml)
8. Ọrụ Nzuzo-CAS: 1101854-58-3
JZL-184 jiri aka ya gbochie MAGL, enzyme kachasị maka mmebi nke endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Anandamide na 2-AG bụ endocannabinoids abụọ na-adọrọ adọrọ nke na-eme ka ndị na-enweta cannabinoid CB1 na CB2. Anasamide kachasị metabolized site na fatty acid amide hydrolase (FAAH), ebe a na-eche na monoacylglycerol lipase (MAGL) bụ enzyme bụ isi maka mmebi nke 2-AG. O siri ike ịhapụ ọrụ nke abụọ ahụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-emechi emechi MAGL adịghị ahọpụtakwa, ma na-egbochi FAAH ma ọ bụ enzymes ndị ọzọ. JZL-184 bụ onye nhazi mbụ nke MAGL na nchịkwa nanomolar na 200-fold selectivity maka MAGL vs FAAH. Mgbe e nyere ụmụ oke, JZL-184 mụbara 2-arachidonoylglycerol ụbụrụ na ụbụrụ site na 8-n'ogige, n'enweghị mmetụta ọ bụla na ọkwa nke anandamide.
9. Ndị na-egbochi ndị na-emechi ihe dị iche iche nke monoacylglycerol lipase na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Ngwurugwu 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) na N-arachidonoyl ethanolamine (anandamide) bụ ndị monoacylglycerol lipase (MAGL) na fatty acid amide hydrolase (FAAH) na-abawanye. Nchọpụta e mere n'oge na-adịbeghị anya nke carbamates O-aryl dị ka JZL-184 dịka ndị na-emechi MAGL na-eme nchọpụta arụmọrụ nke ụzọ 2-AG na-egosi na vivo. Ka o sina dị, JZL-184 na ndị ọzọ na-ekwenyeghị na MAGL a kọwapụtara na-egosiputa mmeghachi omume-na-arụ ọrụ na FAAH na carboxylesterases, nke nwere ike ime ka ha jiri ha mee ihe na ọmụmụ ihe ụfọdụ. N'ebe a, anyị na-akọ ọkwa dịgasị iche nke O-hexafluoroisopropyl (HFIP) carbamates nke na-egbochi MAGL na vitro na vivo na-arụ ọrụ dị mma na nhọta nhọrọ dị mma, gụnyere igosi enweghị mmeghachi omume cross-reactivity na FAAH. Nchoputa ndia choputara HFIP carbamates dika chemotype ozo maka igbochi MAGL ma kwesiri ime ka ndi ozo ndi ozo megharia ihe ndi ozo dika ndi ozo di iche iche.
10. Nduzi ịzụta JW-642 MAGL inhibitor nzọụkwụ site na nzọụkwụ
♦ Google AASraw, tinye n'ime www.aasraw.com.
♦ Chọta JW-642 Powder (1416133-89-5) na AASraw
♦ Chọpụta JW-642 ntụ ntụ windo XP, na dee ederede gị.
♦ Anyị na-enweta email gị ma soro gị kọọrọ gị nkọwa ndị ọzọ.
♦ Kwenye ikikere ahụ, mgbe ahụ akwụ ụgwọ ma anyị ga-ahazi ngwaahịa ị ga-esi nweta ya.
8 Ihe Dị Mkpa Dị na Powder Stenbolone	Ihe 8 kachasị na-enwe mmekọahụ na-akpata ọgwụ ọjọọ na ụwa